Ny mpisava lalana iraisam-pirenenan'ny fanampiana dia mpitaingina soavaly
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » Ny mpisava lalana iraisam-pirenenan'ny fanampiana dia mpitaingina soavaly
Enga anie 1, 2018
Mametraka ny fandaharam-potoanan'ny dia fitsangatsanganana miaraka amina tanjona iray, ny Relief Riders International dia nanambara fitsangatsanganana mahavariana 2 ho an'ny taona 2018: Andes / Amazon Relief Ride tamin'ny Jolay tamin'ny alàlan'i Ekoatera sy ny Pushkar Relief Ride tamin'ny volana Novambra ho an'ny Pushkar Camel Fair malaza any Rajasthan, India.
Nandritra ny folo taona mahery, ny mpitsangatsangana an-tsambo dia nitondra mpikaroka tsy mataho-tody amin'ny dian'ny soavaly tsy hay hadinoina hatrany amin'ny vazan-tany lavitra indrindra eto an-tany. Manomboka amin'ny tendrombohitra sy ala tropikaly any Amerika atsimo ka hatrany amin'ny lemaka malalaka sy eny an-tampon'ny havoanan'i Rajasthan dia manome traikefa tsy hay hadinoina ny tsirairay. Mandeha mamakivaky ny faritra lavitra sy tsy misy fotony mba hanomezana fanampiana olona ho an'ny vondrom-piarahamonina ambanivohitra eo an-toerana, ny fanampiana fanampiana dia manala anao ara-bakiteny.
Mandray ny kanton'ny fitsangantsanganana miadana any amin'ny sehatra vaovao, ny Relief Riders International dia momba ny asa soa tahaka ny fahitana azy manokana: fandosirana ny sahirana amin'ny fiainana andavanandro hametrahana indray, hifandray ary hamerina indray. Mieritrereta ny maraina mifoha ao ambanin'ny lamba manarona feon'ny vorona; andro niampitana ny lemaka, lohasaha ary tendrombohitra mitaingina soavaly tsara tarehy Marwari sy Criollo; ary ny hariva manodidina ny afon-dasy mizara tantara mitantara safari mandritra ny sakafo hariva mahaliana.
Ao ambadiky ny dia rehetra dia misy antony maha-olona sy maika. Nanomboka tamin'ny 2004 dia nanatsara ny fiainan'ny olona 25,000 ny Relief Riders International, ao anatin'izany ny ankizy 18,700 XNUMX manerana an'i India, Torkia ary Ekoatora. Io fiononana filantrana io no mampiavaka ny Relief Riders International amin'ny safaris soavaly hafa. Raha ny Andres / Amazon Relief Ride dia miaraka amin'ny Vokovoko Mena Ekoatoriana ary misy toby fitsaboana roa (manarona mpitsabo areti-maso, mpitsabo nify, CPR ary mpitsabo aretim-behivavy), ny Pushkar Ride tamin'ny Novambra dia mifantoka amin'ny sekoly lavitra loharanon-karena; ny programa Give A Goat; ary tobin'ny mpitsabo nify, maso ary fiterahana.
Ny fitsangatsanganana tsirairay dia tsy mitovy amin'ny farany ary namboarina tsara ho an'ny vondron'ireo mpitaingina miavaka. Ny Andes / Amazon Relief Ride (manomboka ny 20 Jolay - 1 Aogositra 2018) dia manomboka eo amin'ny Andean Plateau - fonenan'ny foko Quechua - ary midina mamaky ny ala rahona alohan'ny hiampitana mankany Amazon (amin'ny fiaramanidina, lakana ary an-tongotra) handany fotoana iarahana amin'ny vahoaka Sàpara, foko teratany fantatra amin'ny fahalalàn'ny zavamaniry rakipahalalana. Mandritra izany fotoana izany, ny Pushkar Relief Ride (11 - 20 Novambra 2018) dia namakivaky ny Desar Thar taloha nankany amin'ny Pushkar Fair malaza eran-tany, foara soavaly sy rameva lehibe indrindra eran-tany: festival Rajasthani lehibe misy dihy nentin-drazana, mozika mivantana, akrobatika, fanatanjahantena, mitaingina zaridaina, mpivarotra eo an-toerana ary fety mandritra ny tontolo andro - fijerena ambaratonga lehibe.
Ny Relief Riders International dia sanganasan'i Alexander Souri izay - tamin'ny 2010 - dia nahazo loka UN Positive Peace Award noho ny ezaka mahaolona nataony. Nilaza ny heviny momba ny dia ho avy nataon'i Souri tamin'ny taona 2018:
“Ankoatra ny toerana misy ny famosaviana sy ny mitaingina mahafinaritra, ny dia ataonay dia mihoatra lavitra noho ny fitsangatsanganana an-ala. Hatrany am-piandohana, ny Relief Riders International dia nanao ny asan'ny mpisava lalana notarihin'olombelona, ​​nifantoka tamin'ny vondrom-piarahamonina lavitra sy tsy dia jerena, manomboka amin'ny halalin'ny ala mando any Amazonia ka hatrany amin'ny lemaka taloha Rajasthan. Ireo izay manana fanahim-panahy hanao trafika dia mitady tanjona amin'ny diany: fomba iray handraisana anjara amin'ny fanovana tsara, hifaneraserana amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary hialana fahatsapana fa tena mirindra sy mientanentana. Io fitsipi-pitondrantena io dia eo am-pon'ny ivon-toeran'ny Relief Riders International. ”
Ny relief Riders International dia manolotra dia kely ataon'ny vondrona kely telo isan-taona:
- Jolay 2018 Andes / Amazon Relief Ride (20 Jolay - 1 Aogositra)
- Novambra 2018 Pushkar Relief Ride (11 - 20 Novambra)
- Febroary 2019 Khimsar Relief Ride (19 Febroary hatramin'ny 2 martsa)
Raha mila fanazavana fanampiny, azafady kitiho eto na araho ny @reliefriders amin'ny Instagram.
The Groton Inn: ny trano fandraisam-bahiny tranainy indrindra tany Amerika dia namerina tamim-pahagagana tamin'ny vanim-potoana vaovao
Air Canada dia mandefa ny làlambe voalohany tsy miato 25 amin'ny Fahavaratra 2018